Ku soo dhawow our website.
sheet Aluminmum iyo saxanka
sheet ahama iyo saxanka
Ahama alaabta birta
Videos iyo sawiro
Shenzhen Swiny Technbology Co., LTD, waxa uu ku yaalaa Guanglongxing Industrial Area, Degmada New Guangming, Shenzhen. Waxaa jecel yahay deegaan-soo-saarka iyo howl wanaagsan halkan, gaadiidka haboon sida 's soo socda si Guangmingcheng Railway Station iyo Shenzhen awgiis Ring Expressway.
Shenzhen Swiny Technbology Co., LTD, sida shirkad xirfadeed leh waayo-aragnimo 12 sano in industry ee ahama, waxaan ku takhasusay processing ee noocyada kala duwan ee gariiradda ahama birta, strips ahama, wareegyada ahama iyo ulo bir. waxaa sidoo kale naga go'an in aan ka processing iyo ganacsiga qalabka aluminium, iyo waqti isku mid ah aan wada shaqeyn la leh shirkado badan oo ahama horumarinta alaabta birta iyo wax soo saarka oo sannado badan, si loo hubiyo in la isticmaalayo alaabta ceeriin ee tayada sareeya si ay u abuuraan midhaha ugu fiican si aan u kulmi karaan baahiyaha kala duwan ee macaamiisha.
Waxaa ka mid ah waxyaabaha aan u shaqeeyaan, waxaan inta badan ku talinaynaa our muraayad ahama, midabka ahama iyo qoordiidka ahama oo waa ay ka sareeyaan shirkadda asaaga our in technology.
"Tayada marka hore, u janjeedha macaamiisha, maamulka daacadnimadayda, oo dhan horumarka shaqaalaha" waa falsafad joogto ah. Waxaan leenahay iskaashi muddo dheer kooxda steel Chinese, sida Baosteel, TISCO, Baoxin iyo steel shirkadaha kale ee wax cayriin, si ay u siiyaan macaamiisha la soo saarka Kharashka-ool ah ugu wanaagsan. Our qalab iyo waxyaabaha ku maray shahaado SGS iyo Cuntada-Fasalka ah, ammaanka ayaa ah mid deggan oo lagu kalsoonaan karo. Waxaan si adag u aaminsan yihiin in tayada iyo daacadnimada noo oggolaan doonta in aan dunida ka ballaaran la macaamiisha mari wada!
damaanad qaaday adag.
cinwaanka Factory: Floor 1th B No.1 Building, meesha par Guanglongxing Warshadaha, bulshada Baihua, Degmada Guangming, Shenzhen.
Us Haddaba Wac: (86) 0755-26665358
Metal Lunch Box Stainless Steel, Ahama Steel Box Qadada, Lunch Box Stainless Steel Food, Ahama Steel Bento Box Qadada, Lunch Box Steel Stainless, Box Qado ahama Steel,